Al-Shabaab oo shalay gelinkii dambe ku toogtay Baardheere nin ay ku eedeeyeen inuu basaasayay | Sagal Radio Services
Al-Shabaab oo shalay gelinkii dambe ku toogtay Baardheere nin ay ku eedeeyeen inuu basaasayay
Sagal Radio Services • News Report • May 14, 2014
Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe fagaare ku yaal degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ku toogtay nin ay ku eedeeyeen inuu u basaasayay Ciidamada dowladda Soomaaliya, kadib markii Maxkamad ay ku xukuntay dil.
Sida ay sheegayaan wararka ninka lagu fuliyay xukunka dilka ayaa lagu magacaabayay C/xamiid Sheekh maxamed Xuseen oo 29 jir ahaa, waxaana qaadida xukunka riday uu sheegay in ninkan uu qirtay dambigiisa.
Qaadiga maxkamada ayaa sheegay in ninkan uu muddo sanad iyo bil uu la shaqeynayay ciidamada dowladda, una basaasayay, waxaa uu xusay in cid kasta oo u basaasta ciidamada dowladda iyo hey'adaha sirdoonka reer galbeedka ay marsiinayaan shareecada islaamka.
Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Gudoomiyaha Shabaabka ee Gedo iyo dadweyne fara badan ayaa ka qeyb galay fulinta xukunka dilka, iyadoo dadweynaha uu la hadlay Sheekh C.raxmaan Sayid.
Gudoomiyaha Shabaabka Gobolka Gedo C/raxmaan Sayid ayaa ugu baaqay waalidiinta in wiilashooda ay ka celiyaan inay u baasasaan ciidamada Itoobiya, waxaana uu xusay in qofkii ay ku helaan basaasnimo ay xukunka dil ku fulinayaan.
Ma ahan markii u horeysay ee Al-Shabaab xukuno dil ku fuliyaan rag ay sheegaan inay u basaasaan dowladda, AMISOM iyo sirdoonada reer galbeedka, bilo ka hor ayay aheyd markii ila saddex ruux qaarkood ahaa saraakiil ka tirsanaa ay ku dileen degmada Baraawe, markii lagu helay inay hagayeen diyaaradaha wax basaasa ee aan duuliyaha laheyn.